Barotra Mora - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex Schoolraharaham-barotra Mora
Raharaham-barotra Mora (Niely sy Commissions)
Iray amin'ireo tombontsoa touted ho Forex, Ary matetika ny mpanakalo ny tenany, dia ny hoe tsy misy naniraka, fanambarana iray izay mety hitarika ny ankamaroan'ny-bava Newbie mpivarotra hieritreritra fa ny ara-barotra forex dia virtoaly maimaim-poana charge. Ho an'ny ampahany betsaka, raha tsy manao raharaham-barotra miaraka amin'ny ECN (tambajotram-pifandraisana elektronika) ianao (izay mitaky komisiona madinika amin'ny fifanakalozam-barotra), tsy misy ny kaomisiona. Saingy tsy midika izany fa afaka mitantana asa ianao maimaim-poana -poana. Tsy misy maimaim-poana sakafo atoandro.
Mpanakalo nanorina an-kolaka raharaham-barotra lany amin'ny endrika Niely, ary raha toa izy ireo ECN Mpanakalo, Mampianiana asa koa izy ireo, araka ny ho hitantsika.
Inona no atao hoe Fielezan'ny?
Ny niely no maha samy hafa ny "Mangataka" ary ny "Dia asaovy" vola vidin'ny iray ny vola broker notsongaina. Niely dia tokony nangonin'ny ny broker ho toy ny sarany ho an'ny fanatanterahana baiko.
Sora = anontanio vidiny - vidiny aloa
Raha tokony ho vaomiera, ny fiparitahana dia lasa saran'ny broker ny fanatanterahana ny varotra.
Andeha isika hijery ny ahitana ny MT4 tsena fiambenana (4 tarehimarika broker), izay mampiseho ny vola rehetra, niaraka tamin'ny ireo dia asao ary mangataka ny vidiny:
Avy amin'ny ohatra etsy ambony, dia afaka fongotra noho ny ambony telo tsiroaroa mba hahita ny niely:
Ampandehano / Anontanio
USD / CHF 1.0536 / 1.0538 2 pips Azonao atao ny mividy USD / CHF amin'ny 1.0538, amidy amin'ny 1.0536, ary mandoa 2 pips
EUR / USD 1.2923 / 1.2924 1 pips Azonao atao ny mividy EUR / USD amin'ny 1.2924, amidy amin'ny 1.2923, ary mandoa 1 pip
GBP / USD 1.5306 / 1.5308 2 pips Azonao atao ny mividy GBP / USD amin'ny 1.5308, amidy amin'ny 1.5306, ary mandoa 2 pips
Hitanao fa ny ankamaroan'ireo majistra dia eo anelanelan'ny fiparitahan'ny pipetana 1-3, izay tsy dia be loatra amin'ny saram-pandraharahana (na ny fahasalamana) handresena. Na izany aza, raha mijery ny faran'ny tabilao etsy ambony ianao, dia ho hitanao fa niely ny 7 pips (1.4839 - 1.4832 = 0.0007) ny EUR / AUD, izay mahatonga ity mpivady ho sarotra kokoa ho an'ny mpivarotra, noho ny fotoana ny varotra dia novonoina, ianao dia nidina -7 anao. Amin'ny ankapobeny, tiantsika ny handefa pairs izay mihanaka ambany noho ny 5 raha tsy misy antony matotra miorina amin'ny antony.
Raha toa ka hanao sonia ny amin'ny fampidirana mpanakalo izay manolotra rebate toy ny http://www.CashBackForex.com, Ianao dia mahazo ny isan-jato ny niely indray ny kaonty isan-barotra, izay mety be hampidina ny vidin'ny niely-barotra.
Ny raikipohy farany vola raharaham-barotra dia mitovy izany (fa mpanakalo rehetra voatanisa amin'ny Cashbackforex):
Vidin'ny fifindrana = (fanaparitahana + vaomiera) - Rebate Forex Cashback
Fitaovana sy Websites To mora Hijery, Track ary ampitahao Niely
Misy MT4 fitaovana famantarana avy any azo asisika amin'ny vola mora foana tabilao mba haneho ny tena amin'ny fotoana ara-tantara ary indraindray Niely izany ny vola tabilao mpivady.
Ireto misy vitsivitsy izay tiantsika:
StatMonitor_1.1Phat-.mq4 Mampiseho manitatra, Buy / Sell Ampifamadiho, Boky Faha-mariky ny tabilao.
FXRM Aelezo History.ex4 Tracks amin'izao fotoana izao niely, Max niely sy ny sombin Niely tantara.
Multi Miaraka tsiroaroa Fielezan'ny Monitor.mq4 Tracks Niely ny maro amin'izao fotoana izao tsiroaroa.
Tranonkala izay Track Ary Ampitahao Broker Niely
Misy koa tranonkala mampitaha ny fiparitahan'ny mpivarotra isan-karazany, ny tena fotoana ary ny tantara, manerana ireo mpivarotra vola, toy ny:
http://www.fxintel.com/live/ 28 mpanakalo. Live niely anaty fiara. Fitaovana Side: a) Avg niely tamin'ny 12 hrs / andro ny mpanakalo voafantina; b) tsara indrindra 4 niely mpanakalo.
http://www.mt4spreads.com/ 23 mpanakalo. Live niely anaty fiara. Fandavahana hidina any tsiroaroa: eo ho eo niely tantara (tsara!). Side fitaovana: hahita tsara indrindra niely ny fivoriana na ny fotoana filanjana azy.
http://www.mt4i.com/spread/symbol.aspx Xokers brokers. Symbol View: Ny mpivady manokana dia manaparitaka tatitra momba ireo mpivarotra mandritra ny herinandro lasa (min, avg, max - amin'ny ankapobeny ary isaky ny fivoriana).
Fijery Broker: Fijery broker: fampandrenesana ny broker voafidy ho an'ny mpivady rehetra mandritra ny herinandro lasa (min, avg, max - amin'ny ankapobeny ary isaky ny fivoriana).
http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads 65 + mpanakalo. Live niely anaty fiara. Fandavahana midina fanadihadiana an tsiroaroa: eo ho eo niely tantara (tsara!), Miaraka amin'ny fivoriana sy ny eo ho eo ny fiovana (tsara!), Ary ny mpanakalo amin'ny tsara kokoa Niely (tsara!). Best: mpanakalo amin'ny lalina kokoa sy hanintona kokoa ny maso fandavahana teo fanadihadiana.
Mora niely sy matetika Trading
Tsara homarihina fa niely barotra ny vola lany ny varotra Forex Afaka hiakarany matetika varotra, koa raha miantso ny rafitra ho an'ny matetika varotra, te-ho azo antoka fa manana ny fahafahana mandresy ireo raharaham-barotra ny vola lany. Factoring in niely vola lany ho toa tsara rafitra indrindra haingana dia afaka manambara azy ireo ho tsy fahombiazana. Soa ihany fa ny MT4 backtesting fandaharana (antsoina hoe Strategy Tester) Efa niely ny antony ny vola lany (na, fara fahakeliny, ny niely tamin'izany fotoana backtesting), ary izany no niely factoring endri-javatra manan-danja antony izany no izy sarotra ny hamorona mahomby mitady MT4 EA in backtesting, aoka irery ao nandroso fitiliana. Ary raha ny rafitra dia scalping rafitra miankina amin'ny tena mafy Niely noho ny zava-bitany, dia ho tsy fahombiazana raha miovaova dia afaka ny broker Niely ireo nandritra ireo fivoriana fa ny scalping Mitarika tsikelikely ny rafitra dia manararaotra.
Case in teboka: Nisy maro any Azia scalping EAs noforonina in 2009-2010 amin'ny miainga tsiroaroa (EURCHF, EURGBP) fa ny ankamaroany rehefa tsy Niely avo roa heny tamin'ny tsiroaroa roa ireo mandritra ny fivoriana.
Iza no tsara To ara-barotra Miaraka Amin'ny A Forex Broker raikitra na Variable Niely?
Misy tombontsoa sy ny lafiny ratsy amin'ny mpanakalo roa karazana.
Misy ampaham-bokatra ampielezana maromaro ety ivelany, ary nahita olona vitsivitsy aho niparitaka be toy ny pipa 1 amin'ny EUR / USD. Ny tombony amin'ity fitsinjaram-pahefana ity dia miharihary: ny mpihatsaravelatsina dia mihevitra fa afaka mitazona ny tsena ambany izy ireo amin'ny fotoana rehetra, na dia mandritra ny fotoana mampivelatra ara-barotra aza, toy ny mandritra ny hetsika vaovao goavana, izay mety hampitombo ny fampitomboana ny fifampiraharahana mba hampihena ny loza . Ny mpihira dia mety hiparitaka mihitsy aza mandritra ny vanim-potoana ara-pahasalamana toy ny fivoriana Aziatika, izay ahafahan'ny mpampindram-bola mifampizara mihamitombo ny fihanaky ny fatiantoka ny tahan'ny liquidity. Na izany aza, misy mpikarakara maromaro mifampitohy milaza ny fitohizan'ny fifandirana mandritra ny fotoana mangina toy ny mandritra ny fivoriana Aziatika (ohatra, raha 2 ianao ao EUR / CHF mandritra ny andro, dia 4 na 5 anao mandritra ny alina), ary koa mandritra ny vaovao Fampandrenesana. Raha manova ny fiparitahana mandritra ny alina na vaovao ny mpikarakara ny faktiora, dia hampitandrina azy ireo ao amin'ny tranokalany. Ny fihoaram-pefy mahatsiravina rehetra eny an-tsena: vaovao, fanodikam-bola ara-toekarena na hetsika hafa eran-tany dia hiteraka haingana dia haingana hanitatra, raha tsy mampanantena ny broker mba tsy hanaparitaka na oviana na oviana. Raha liana amin'ny mpikarakara fandefasana hentitra ianao, jereo ny politika naparitaka alohan'ny hidiranao ao.
Tato ho ato dia nisy fihenam-po miitatra toy izao. Ny fiparitaka miovaova dia mety lafo. Miely isan-karazany ny fiparitaka miovaova arakaraka ny faharetan'ny tsena sy ny etikety. Haingam-pandeha ambony kokoa - fanaparitahana avo kokoa, fihenan'ny ambany kokoa - ny fiparitahana ambany kokoa. Araka ny mahazatra ara-dalàna ny andro, ny mpivady vola dia mety mihena tanteraka ary noho izany dia mijanona hatrany ny fiparitahana, fa rehefa mitombo ny fahatokisana noho ny vaovao na hetsika geopolitikika dia mety hitombo ny fiparitahana, angamba avy amin'ny fantsona 2 miparitaka amin'ny 4-6 Ny fiparitaka, na ny fantsom-pana 20 dia miparitaka raha mahery ny hetsika. Mandritra izany fotoana izany: ny solika miakatra ambony - miparitaka kokoa, mihena ny rano - manaparitaka kokoa. Ny EUR / USD dia ohatra tsara amin'ny vidim-piainana avo lenta izay misy koa ny fihenam-bidy ambany (indraindray manodidina ny fiparitahan'ny 1.5), ary ny EUR / AUD dia ohatra iray amin'ny mpivady vola miaraka amin'ny fihenan-tsoavaly ambany sy fiparitahana avo kokoa (matetika manodidina ny fiparitahan'ny fika 15) .
Mitandrema amin'ny fiparitahan'ny "mihena" (ohatra, ny fiparitahan'ny GBP / USD "manetry tena" pipy 1) hamandrihana ireo mpivarotra ho lasa garazy toa izany. Na dia mihena aza ny fiparitahan'ny "ambany tahaka" dia azo antoka fa tsy hitsahatra ny varotra amin'ireo fiparitahana ireo ianao satria hitranga mandritra ny fe-potoana segondra ao anatin'ny vanim-potoana 24.
Raha tokony hijery ny fiparitahan'ny "ambany be" dia mifantoha amin'ny famoahana miely "mahazatra", izay indraindray no navoakan'ny broker. Ny famakiana "mahazatra" dia tokony ho tsara indrindra amin'ny ankamaroan'ny fotoana, fa indraindray kosa ny famaritana ny mahazatra dia tsy manjavozavo.
Mbola tsara kokoa, dia miezaha hahazo niely eo ho eo. Tsara tarehy be izany, satria mila ho fiheverana pip rehetra fluctuation barotra mandritra ny andro. Vitsy ny mpanakalo Maneho eo ho eo niely Pricing, noho izany dia hevitra tsara ny misaina ny eo ho eo nohosorana ny fitaovana sy ny tranonkala nalefa etsy ambony.
ECN Providers fa hampidina ny hampielezana sy Add Commission
Mpanakalo sasany, antsoina hoe ECN mpivarotra (tambajotram-pifandraisana elektronika), manangona ny vidiny mora indrindra avy amin'ny banky fampiasam-bola vitsivitsy ary manandrana mampiseho ny tolotra na tolotra tsara indrindra. Manome vaomiera izy ireo fa tsy manamarika ny fiparitahan'ny varotra mba hamela ny mpanjifany hivarotra amin'ny vidiny akaiky ny vidin'ny banky. Noho izany, ny tombony lehibe indrindra amin'ny fifanakalozana amin'ny ECN broker no maha samy hafa ny fitarainana niely. Fa misy trondro (jereo Mariho eto ambany).
Fanamarihana: miaraka ECN Ny mpikarama dia tsy maintsy mitazona ny vidin'ny fihenana ankoatra ny komisiona, na dia mety ho ambany aza ny komity spread + + noho ny fiparitahan'ny mpizarazara Market maker mahazatra na maro mivantana amin'ny fanodinana (STP) brokers. Ankoatra izany, misy tombony faharoa. Mandritra ny vanim-potoana (na vanim-potoana ara-bola) a ECN forex broker Hiezaka hampiseho ny tsara indrindra vidiny alaina, fa tsy manamarika ny iray niely tamin'ny offset mety.
Ny tombon-dahiny amin'ny ECN mpanakalo dia afaka ho voafitaka ka ny fisainana izay manana raharaham-barotra vidiny ambany dia ambany, raha ny marina dia mety mitovy na ambony noho ny hafa mpanakalo. Satria isika rehetra nampiofanina mba hijery ny niely, dia mety halaim-panahy hiaraka amin'ny ECN broker amin'ny ambany indrindra niely. Na izany aza, ny vaomiera vidin'ny varotra nanampy ny tsirairay dia afaka hanao ECN broker mainka tsara tarehy kokoa noho ny sasany tamin'ireo fifaninanana kokoa STP mpanakalo izay manana ambany niely tsy misy asa. , Ohatra, dia mety hahita fa ny ECN broker manana fihanaky ny 1 amin'ny EUR / USD, fa raha izany dia manampy ihany koa ny vaomiera ny $ 1 isaky ny 10,000 be ianareo, dia raha ny tena varotra miaraka amin'ny broker izay manana 2 pip barotra vola.
Tsy izao no filaza mandidin 'Raha mitady ny tsara ECN broker ny fanadihadiana na ny eo ho eo sy ny asa nanirahana niely vola, ka manampy azy. Indraindray dia afaka mandoa ny fikarohana eny: misy tsara ECN mpanakalo avy any izay manao ny marina no tsara indrindra vola raharaham-barotra (niely + iraka) ao amin'ny forex raharaham-barotra.
Fa ECN mpanakalo
Raharaham-barotra Cost = Fielezan'ny + Commission
ECN mpanome tolotra izay hampidina ny niely, ary hametraka asa nanirahana
No tsara kokoa ny varotra amin'ny forex broker amin'ny raikitra na miova Niely
Niely sy ny Commissions
Marika View manokana
Fitaovana sy Websites mba mora Hijery Track sy Ampitahao amin'ny Niely
Inona no atao hoe niely